အောင်လကသူချစ်တဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း စကားဆို – MEDIALANN
ပရိတ်သတ်ကြီး မကြာတဲ့ အချိန်ကာလမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် One Cham-poinship ရဲ့ One Century ထိုးသတ်ပွဲကြီးမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီရာနဲ့ အောင်လအန်ဆန်တိုထိုးသတ်မယ့်ပွဲကြီးရောက်လာတော့မယ်နော်။ ယင်းပြိုင်ပွဲမှာ ဘရန်ဒန်ဗီရာဟာ အောင်လရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ရလိုတဲ့အတွက် စိန်ခေါ်ထိုးသတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် အောင်လက လည်း သူချစ်တဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်ကြီးကို ယခုလို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စကားဆိုထားပါသေးတယ်။
ဂျပန်ကိုပြန်သွားပြီးယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့အတွက်ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်..စတစ်ဖ်ဂျော့ပြောဖူးတဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်ဗျ “သင်အမြင့်ဆုံးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်..အားလုံးနဲ့အတူတကွသွားမှဖြစ်မယ်!”ကျွန်တော်လျှောက်လမ်းနေတဲ့ခရီးရှည်မှာအတူတကွပါဝင်ပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်…ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့အသင်းဖော်တွေကကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်..ကျွန်တော့်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပေးကြပါတယ်…အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့အတွက်.မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး…
Justalittle over2weeks now and we are back in Japan . Steve Jobs once said,“If you want to go far, you go together !” Thank you for going with me on this journey! Thank you for the love that you show me, my team is preparing me well and I can’t wait for Oct 13th. ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ …. အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ကြရင် အောင်လ ကို အားပေးရင်း ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကို လက်မလွတ်လိုက်ကြနဲ့နော်။
Source– Shwe Yaung Lan
ပရိတျသတျကွီး မကွာတဲ့ အခြိနျကာလမှာ အောကျတိုဘာလ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ဂပြနျနိုငျငံ တိုကြိုမွို့တှငျ One Cham-poinship ရဲ့ One Century ထိုးသတျပှဲကွီးမှာ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား ဟဲဗီးဝိတျခနျြပီယံ ဘရနျဒနျဗီရာနဲ့ အောငျလအနျဆနျတိုထိုးသတျမယျ့ပှဲကွီးရောကျလာတော့မယျနျော။ ယငျးပွိုငျပှဲမှာ ဘရနျဒနျဗီရာဟာ အောငျလရဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျး ခနျြပီယံခါးပတျကို ရလိုတဲ့အတှကျ စိနျချေါထိုးသတျခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲအတှကျ အောငျလက လညျး သူခဈြတဲ့ မွနျမာပရိတျသတျကွီးကို ယခုလို ကြေးဇူးတငျကွောငျး စကားဆိုထားပါသေးတယျ။
ဂပြနျကိုပွနျသှားပွီးယှဉျပွိုငျထိုးသတျဖို့အတှကျရကျသတ်တပတျ ၂ ပတျလောကျပဲလိုပါတော့တယျ..စတဈဖျဂြော့ပွောဖူးတဲ့စကားလေးတခုရှိတယျဗြ “သငျအမွငျ့ဆုံးကိုသှားခငျြတယျဆိုရငျ..အားလုံးနဲ့အတူတကှသှားမှဖွဈမယျ!”ကြှနျတျောလြှောကျလမျးနတေဲ့ခရီးရှညျမှာအတူတကှပါဝငျပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးနဲ့အယောကျစီတိုငျးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ..ကြှနျတျောကိုခဈြခငျပွီးထောကျပံ့ပေးတဲ့အတှကျအားလုံးကိုကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ…ကြှနျတေျာ့ဆရာနဲ့အသငျးဖျောတှကေကြှနျတျောပွိုငျပှဲဝငျဖို့အတှကျ..ကြှနျတေျာ့ကိုအကောငျးဆုံးပွငျဆငျလကေ့ငျြ့ပေးကွပါတယျ…အောကျတိုဘာလ ၁၃ ရကျနပှေဲ့ ယှဉျပွိုငျထိုးသတျဖို့အတှကျ.မစောငျ့နိုငျတော့ပါဘူး…
Justalittle over2weeks now and we are back in Japan . Steve Jobs once said,“If you want to go far, you go together !” Thank you for going with me on this journey! Thank you for the love that you show me, my team is preparing me well and I can’t wait for Oct 13th. ကဲ ပရိတျသတျကွီးရေ …. အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျနကွေ့ရငျ အောငျလ ကို အားပေးရငျး ရငျခုနျစရာကောငျးတဲ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲကို လကျမလှတျလိုကျကွနဲ့နျော။